Warqad Furan oo ku socota Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK | Udugland.com
Warqad Furan oo ku socota Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK
Wallaalaheyga Soomaaliyeed ee ku nool UK, warqadan furan ayaan idiin soo qoray oo ujeedadeedu tahay inaan idinku dhiirigeliyo, idinkuna baraarujiyo inaad isu geystaan dhammaan kartidiina oo aad ku midowdaan inaad codkiina dhiibataan oo soo wada baxdaan oo aad u codeysaan 23ka June 2016 in Dowladda Ingiriirka ay ka mid noqoto Midowga Yurub.
Ololahan doorashada si ay UK uga sii mid ahaato Midowga Yurub waxaan ka soo bilaabay Muqdisho oo 6934.66 km u jirta London. Waxaana idinka codsanayaa inaad ololahaas kaalin fiican ka qaadataan. Walwelka i hayo ayaa ah in haddii aan nahay Soomaalida UK inaan fahmi weyno muhiimada codenta iyo in codadkeena aan laga faa’iideysan oo aad soo bixi weysaan maalinta codeynta. Haddii aanan codkeena dhiiban, waxaa dhici karta in natiijadu ay noqoto mid aan danaheena u wanaagsaneyn. Waxaa la joogaa waqtigii aan Aftidan Dadweynaha (referendum) ka doodi laheyn oo aan si fiican u fahmi laheyn waxa loo codeynayo. Aftidii ugu danbeysey ee UK ay uga mid noqotay Midowga Yurub waxey aheyd sanadkii 1975tii, oo waqtigaas ma heysan fursada aan maanta heysano, oo inteeda badan kuma aanan fikireynin 1975tii inaan imaneyno UK oo aan noqoneyno muwaadiniin oo aan weliba ka qeybqaadan karno Afti Dadweyne oo aad saameyn ugu leh caruurteena iyo kuwa ay sii dhalaan.
Fadlan waxii faahfaahin ah ka daalaco website-kan www.strongerin.co.uk si aad u fahamto faa’iidada ku jirta in UK ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub. Fadlan sidoo kale la wadaag macluumaadkan saaxiibadaa iyo qoyskaaga, kuna dhiiri geli iney ololaha ka qeybqaataan. Sida aad macluumaadka website-kan ku aragtaan, UK inay ka sii mid ahaato Midowga Yurub waxaa ku jira faa’iido dhanka dhaqaalaha ah, dhanka UK inay Midowga Yurub hoggaamiso iyo dhanka amniga oo sii hagaaga. Dhaqaalaha Ingiriiska ayaa kobcaya oo xoogeysanaya, oo keeni kara in dhalintu shaqooyin helaan iyo qoysaska oo hela maciishad jaban. Daraasaadka la sameeyey ayaa sheegaya in UK ay 24 billion oo UK pounds oo maalgashi ah inay ka hesho Midowga Yurub. Soomaalideena ku dhaqan UK waxaan marwalba booqanaa qoysaskeena iyo saaxiibadeena ku nool Yurub-ta kale, oo waxaan heli karnaa diyaarado jaban oo raqiis ah haddii UK ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub. Hay’ada Lacagta Adduunka (IMF) ayaa iyagana si cad u sheegay inay taageerayaan ololahan ah in UK ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub, oo ay weliba ka digeen qasaaraha ka iman kara dhanka dhaqaalaha waa haddii ay UK ka baxdo Midowga Yurub.
Soomaalideena ku nool UK faa’iido badan baa noogu jirta in UK ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub. UK oo ka sii mid ahaata Yurub, waxey keeneysaa in UK ay noqoto waddan awood ku sii leh caalamka, sidaas daraadeed, in Ingiriiska uu noqdo mid awood badan ku leh caalamkana waa fii’iido weyn oo dadkeena heysta dhalashada UK. Dhanka kale Ingiriiska waxuu ka bad-baadayaa khatarta amni darada adduunka ka jirta waa haddii uu ka mid yahay Midowga Yurub oo ay iska kaashan karaan. Ka mid noqoshaha Midowga Yurub waxey sahleysaa in shaqooyin badan la helo oo carruurteena u keena fursada shaqo bacdamaa ay waddanka wax ku barteen. Jaaliyaddeena Soomaalida ayaa faa’iido weyn ku qabta marka loo fiiriyo Jaaliyadaha kale, bacdamaa ay carruurteena ka soo qalin jabinayaan Jaamicadaha UK oo ay diyaar u yihiin inay shaqooyin raadsadaan.
Sidaad la socotaan Ololaha mar hore ayuu bilowday si maalinta Aftida Dadweyne (Referundum) ee 23ka Juun 2016 uu qof walba u codeeyo. Maalintan 23ka Juun waa maalin aad u weyn oo ay shacabka Ingiriiska u codeynayaan inay ka sii mid ahaadaan Midowga Yurub iyo in kale. Waad la socotaan in Ingiriiska uu khariidad ahaan ku dhex yaallo Yurub, mana aha in Yurub la sii kala qeybiyo oo cadaawo laga dhex abuuro. Mida kale, Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska Rt Hon David Cameron MP ayaa horey ula gorgortamaya Madaxda dalalka Yurub oo ka soo dhameeyey in arrimo badan UK loo madax-bannaaneeyo oo ka mid noqoshadu waxey noqoneysaa mid horey looga heshiiyey inaan UK arrimaheeda gaarka ah la soo faragelin sida Waaxda Socdaalka (Immigration), dhanka ciidanka, iwm. Sidaas daraadeed, waxaan si xoogan u aaminsanahay inay muwaadiniinta UK faa’iidooyin badan ku qabaan ka sii mid ahaanshaha Midowga Yurub oo UK ay noqoneyso mid awood leh, oo la jaanqaadi karta marxalada hada jirta. Midowga Yurub waxuu noqonayaa mid liita mar haddii ay UK ka go’do Midowga Yurub Midowga Yurub oo liitana dan uma aha UK, oo iyadana waxey sii noqoneysaa dal liita oo hooseeya. Yurub waxey u baahantahay UK, sidoo kale UK-na waxey u baahantahay Yurub oo ma kala maarmaan.
Sababta aan warqadan idiinkugu soo qoray ayaa ah inaan fahamsanahay awooda Jaaliyada Soomaaliyeed ee UK, bacdamaa aan ahay shaqsi idnka mid ah. Markii aan joogay UK, 10 sano ka hor, waxaan ka mid ahaa madaxda Jaaliyadda, waxaana si fiican u xasuustaa marka ay Jaaliyadu ku midowdu danaheeda guud, inay wax weyn qaban karaan. Waxaan xasuustaa mar aan Jaaliyadda UK u istaagnay arrimaha Soomaaliya iyo sida aan wax weyn uga qabanay oo keentay in inteeda badan aan dalkii imaano oo aan muddo 8 sano ah ku suganahay Muqdisho si aan u caawino dalkeena iyo shacabkeena, waxaana weli aaminsanahay inaan nafteena u hurnay dalkeena oo ah mid waxtar weyn noo wada leh, oo dlaka markaad eegto 10 sano ka hor iyo maanta wax weyn baa isbedelay. Sidoo kale Dowladda Ingiriiska ay kaalmo weyn ka geysatay nabdeenta Soomaaliya. Maantana waxaa la joogaa waqtigii aan u abaalgudi laheyn oo aan u taageeri laheyn ololahan in UK ay ka sii mid ahaato Yurub oo dan u ah carruurteena iyo jiilalka kale ee naga danbeeya. Midowga Yurub oo xoogan oo UK ay ka mid tahayna waa mid ay dan weyn ugu jirto dalkeeni hooyo xitaa.
Ra’iisul Wasaaraha UK, Rt Hon David Cameron MP, iyo Hoggaamiyaha Xibiga Labour-ka, Rt Hon Jeremy Corbyn MP, ayaa labadaba wada ololahan in UK ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub. Sidaas daraadeed, arrinku ma aha xisbiyo kala aragti duwan ee waa mid Qaran oo dhammaan shacabka UK iyo kan caalamkaba ay faa’iido ugu jirto. Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Labour, Jeremy Corbyn ayaa ka digey in xaquuqda shaaalaha uu dhaawac soo gaarayo haddii ay UK ka baxdo Midowga Yurub. Dowladda UK ayaa iyadana aaminsan in UK ay ku sii xoogeysaneyso oo ay nabad sii noqoneyso haddii ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub.
Waxaan rajeynayaa inaan dhankeyga idinka shaafiyey muhiimada in UK ay ka sii mid ahaato Midowga Yurub. Sidaas daraadeed, waxaan rabaa inaad bilowdaan ololahan si aan maalinta 23ka Juun 2016 codkeena u dhiibano oo aan danaheena ka fikirno oo codkeena si dheer loo maqlo. Waxaan si xoogan idinku dhiirigelinayaa inaad u istaagtaan danihiina oo aad ku midowdaan innagoo u daneyneyna caruurteena iyo jiilalka naga danbeeya. Fadlan ololahan ka qeybqaado oo la hadal saaxiibadaa, qoyskaaga, deriskaaga oo ku qanci inay codeeyaan oo codkooda dhiibtaan.
Ma la joogo waqti aan ka cabsano xaqeena aasaasiga ah ee ah inaan codkeena si dheer u dhiibano, mana la joogo waqtigii loo dhaafi lahaa xaqeena in dadka kale ay marwalba go’aano noo gaaraan oo aan codkeena ka baaqsano. Waxaa la joogaa waqtigii aan bulshada dhex-geli laheyn, ka dhaadhicin laheyn danaheena, una istaagi laheyn waxa aan aaminsanahay. Haddii aanan anaga u istaagin danteena, yaan ka sugeynaa inay wax noo qabtaan. In UK ay ka go’do Yurub-ta kale nooma wanaagsana. Waa inay codeynaa oo codkeena dhiibanaa, intii aan ka shaleyn lahaa go’aanka soo baxa ee aan danaheena ku jirin. Fadlan ololahan ka soo qeybgala, is diiwaangeliya, soo baxa maalinta codynta ee 23ka June 2016 si Ingiriiska uu uga sii mid ahaado Midowga Yurub.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta / Lacagta, ahaana La Taliye Sare ee Madaxweynaha iyo labo Ra’iisul Wasaare hore iyo Afhayeenka Dowladda, mudo 10 sano ah ka soo shaqeeyey Dowladaha Hoose ee UK oo aan Maamule ka ahaa.